Antigua neBarbuda Real Estate LOT-AG11
Ingo wedzera kungoro
Wona ngoro ()
Vhara bhokisi rekutsvaga
mhosho Iko kukosha mu "Quantity" ikholamu hakugone kuve pasi pe1
Kuwedzera chinhu kungoro
(Citizenship yeAntigua neBarbuda yekutora iyo Land Plot)
Kutengeswa kwenzvimbo yekuvaka imba munzvimbo yakasarudzika + kuwana Citizenship yeAntigua neBarbuda
Mukana usingawanzo uye unonakidza wekutenga chivakwa mune imwe yeCaribbean inokatyamadza zviitiko zveumbozha. Nyika paPirns Point Peninsula inotambanudza ichitevedza kumadokero kwemahombekombe eAntigua, inzvimbo yakanaka uye isina kusvibiswa ine inotyisa maonero egungwa uye zvakavanzika zvisingaenzaniswi.
Munguva yekusimudzira, kutarisisa kwepedyo kunopihwa kune zvipenyu zvemuno nemaruva echitsuwa ichi, zviwanikwa zvepanyama zvinoshandiswa pese pazvinogoneka uye zvakabatanidzwa pamwe nenzvimbo.
Mahombekombe akadzikama emahombekombe machena ejecha akateedzera pamhenderekedzo yeAntigua inozivikanwa kumadokero kwemahombekombe inoita Pirns Point Peninsula nzvimbo yekunakisa kwechisikigo.
Nezvikamu makumi mana nemapfumbamwe chete zvasara, varidzi vedzimba vachange vachigara munzvimbo yakasarudzika pakati penzvimbo dzepasirese dzimba, iri pagomo uye nemumahombekombe.
Varidzi vedzimba vachave nemukana wekugadzirisa yavo yakanaka imba nerubatsiro rwevanohwina-vanogadzira mapurani, kuve nechokwadi kuti maitiro avo anoratidzwa mune yega inch yeimba yacho.
Mukana usingawanzo uye unonakidza wekutenga zvivakwa mune imwe yenzvimbo dzinotarisirwa dzepamusoro dzeCaribbean. Iwo maCape Pearns masosi anotambanuka achitevedza kumadokero kwemahombekombe eAntigua.
Ugari hweAntigua neBarbuda RUS
Antigua neBarbuda Citizenship ENG
Tweet Tumira pa Twitter
Gadzira pini Sevha kuPinterest
Kudzokera kuAntigua neBarbuda Real Estate
AAAA MUNYORI LLC
adhiresi: Arthur Evelyn Kuvaka Charlestown, Nevis, Saint Kitts neNevis Nhare: + 44 20 3807 9690 E-mail: info@vnz.bz
adhiresi: Estonia, Tallinn, Pae 21, hofisi 25 Nhare: + 372 712 0808
East, Federation Tower, Presnenskaya nab., 12, pasi 19, Moscow, 123100 Runhare: +7 495 991 70 20, +7 495 991 99 20, +7 910 000 70 20 Email: info@vnz.su
WhatsApp Viber teregiramu
adhiresi: Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenia Nhare: + 386 64 233 000, + 386 64 177 151, + 386 31 728 023
adhiresi: Singapore, 7 Temasek Boulevard Suntec Tower Imwe # 12-07 Nhare: + 6531593955
adhiresi: China, Hong Kong, 15 / F Millennium Guta 5, 418 Kwun Tong Road Nhare: + 852 81703676
Nhau uye Zvikwereti:
Tsvaga musoro wenyaya
Ugari hweSaint Kitts neNevis
Ugari hweSanta Lucia
Chibvumirano chekugadzirisa dhata
Ugari hweChinese Citizens
© 2021, ªº Pane iyo Shopify chikuva
Shandisa miseve yekuruboshwe / kurudyi kufamba nenzira yeslideshow kana swipe kuruboshwe / kurudyi kana uri kushandisa nharembozha
Kusarudza iyo yakasimbiswa chinhu inoguma mune izere peji zororo.
Dhinda bharati uye ipapo museve makiyi kuratidza chinhu chaunoda.